जनताको ९० प्रतिशत पैसामा सञ्चालकहरुले रजाई गरे - Aathikbazarnews.com जनताको ९० प्रतिशत पैसामा सञ्चालकहरुले रजाई गरे -
आइतवार, असार १९, २०७९
बिजबजारको भारी छुट सहितको “२० मा BIZ” Campaign
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई नेपाल ल्याब हाउसमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट
भ्रामक समाचार प्रकाशित भएकोमा हब सहकारीको आपत्ती
जनताको ९० प्रतिशत पैसामा सञ्चालकहरुले रजाई गरे
बिहिबार, असार ५, २०७६
गर्भनर साब बैंकका सीइओहरुको नियुक्ती राष्ट्र बैंकको सहमतीमा गर्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?
करिब ८ महिनाअघि साउथ एशियन गभर्नरहरुको भेला थियो । चिया खाने बेलामा छलफल भयो । इण्डोनेशियाका केन्द्रीय बैंक प्रमुखले ‘२ बैंकका सीइओ नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो, म यहाँ छु, ढिला हुने भयो’ भन्नुभयो । मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ–बैंकको सीइओ नियुक्ति तिमीहरुले गर्ने हो र ?
त्यसपछि सँगै रहेका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका केन्द्रीय बैंक प्रमुखहरुले समेत आफ्नोमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको सुनाए । म हेरेको हेर्यौ भएँ । हाम्रोमा त संचालकको चाहना पूरा गर्ने शर्त मान्नेहरुलाई टपक्क टिप्यो, सीइओ बनायो । यो त भएन भनेर मैले नेपाल फर्किएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना बैंकहरुले सीइओ नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि लबिङ गर्न थालेको हुँ ।’
यो सम्भव होला त गर्भनर साब ?
यो व्यवस्थाको विषयमा राष्ट्रबैंकको संचालक समिति र अन्य सरोकारवाला निकायलाई बुझाउन पनि निकै पापड बेल्नु परेको छ । नेपाल फर्किर सबैतिर कन्भिन्स गराएँ, कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बैंकको सीइओ केन्द्रीय बैंकको सहमतिमा मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर लागेँ ।
संचालककोरुपमा आफ्नो श्रीमती राख्नुहोस्, ज्वाई राख्नुहोस्, तर पब्लिकको पैसा चलाएपछि केन्द्रीय बैंकमार्फत जानैपर्छ । सीइओको नियुक्तिमा केन्द्रीय बैंकको सहमति अनिवार्य गर्न लागिएको व्यवस्थाविरुद्ध पनि भित्रभित्रै केही पाकिरहेको हुनसक्ला, तर यस्तो गतिविधिबाट हामीलाई केही फरक पर्दैन, यो व्यवस्था त ल्याएरै छाड्ने हो । ढुक्क भए हुन्छ ।
बैंकका सीइओको विषयमा हामी जत्तिको अरु कसलाई थाहा हुन्छ ? बल्ल–बल्ल कन्भिन्स गरेका छौ, यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । मौद्रिक नीति मार्फत यो प्रक्रिया ल्याउने तयारीमा हामी जुटेका छौं ।
जनताको डिपोजिटमा सञ्चालकहरुको मोजमस्ती देखिन्छ नि ? यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
१० प्रतिशत पैसा लगाएर जनताको ९० प्रतिशत पैसामा बैंकका संचालकहरुले रजाइँ गरेका छन् । त्यो पैसा चलाउने ठाउँमा नियुक्ति हुने सीइओ संचालकहरुको इच्छामा नभई राष्ट्रबैंकको सहमतिपछि जनताका लागि काम गर्ने मान्छेलाई बनाइने हो । संचालककोरुपमा आफ्नो श्रीमती राख्नुहोस्, ज्वाई राख्नुहोस्, तर पब्लिकको पैसा चलाएपछि केन्द्रीय बैंकमार्फत जानैपर्छ । सीइओको नियुक्तिमा केन्द्रीय बैंकको सहमति अनिवार्य गर्न लागिएको व्यवस्थाविरुद्ध पनि भित्रभित्रै केही पाकिरहेको हुनसक्ला, तर यस्तो गतिविधिबाट हामीलाई केही फरक पर्दैन, यो व्यवस्था त ल्याएरै छाड्ने हो । ढुक्क भए हुन्छ ।
बैंकका अध्यक्ष र सीइओहरुको पदकै कारण मर्ज नहुने अवस्था पनि छ नि ?
पद मोहका कारण कतिपय बैंकबीचका मर्जर असफल भएको सत्य हो । यहाँ सबैलाई पद चाहिएको छ । दुईवटा बैंकहरुको मर्ज हुन्छ । एउटाको ७ संचालक, अर्कोको सात । दुई अध्यक्ष, दुई सीइओ हुन्छन्, कसै न कसैले त छाड्नुपर्यो नि । बैंकको संचालक, अध्यक्ष वा सीइओमा बसेर मज्जाले चलखेल गर्न पाएको, मनोमानी गर्न पाएको, सोर्सफोर्स लगाउन पाएको, फूर्ति फार्ति नै बेग्लै, कसले छाड्ने ?
सीइओहरुको चलखेल पनि बढेको छ नि बैंकहरुमा गर्भनर साब ?
सीइओहरुको मनोमानी र बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति बढेपछि सीइओहरुका लागि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । नीतिगत परिवर्तन र सुधार गर्न खोज्दा आँधीहुरी ल्याउन खोजिएको अवस्था आरोप छ मलाई । कुुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था ल्याउँदा पनि आँधीहुरी नै आयो । तर केही फरक पर्दैन ।
भीआईपीले नियमविपरीत राखेका सुरक्षाकर्मी धमाधमफिर्ता
राजश्व छली गर्न पाइदैनः अर्थमन्त्री
दर्ता गरी सञ्चालन भइका इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी काराबाहीमा
२०२२ सम्म सम्पूर्ण नेपालीहरुको घरदैलोमा विजुली सेवा पुग्ने
दाङमा आधुनिक बसपार्क निर्माण हुँदै
एनसेल कर विवादको निर्णय भदौमा हुने
प्रत्येक नेपालीहरुको पहुँचमा आईएमई, नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफलः सीइओ पोखरेल बने नायक !
माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा साढे ३७ करोडमाथि
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संरक्षणमा ठगी धन्दा चलाएका इसेवाका डनहरुको अर्को ठगी धन्दा छताछुल्लः राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर मिश्रको साथ ?
सांग्रिला एकको दुई मुद्दती निक्षेप योजना सार्वजनिक
एन आई सी एशिया बैंक र मर्सि सिटी हस्पिटलबीच सम्झौता
सिद्धार्थ बैंकले प्रदेश १ सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा १० लाख सहयोग दियो
गुराँस लाइफको प्रस्तावित लाभांश बीमा समितिबाट स्वीकृत
डिशहोममा नेपालकै पहिलो भोजपुरी च्यानल
बैंक अफ काठमाण्डुको २५औं वार्षिकोत्सव